Umnxeba omtsha wokuhamba ngenqanawa kwiMbali yaseFalmouth Port Jamaica Ukusukela kwi-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umnxeba omtsha wokuhamba ngenqanawa kwiMbali yaseFalmouth Port Jamaica Ukusukela kwi-COVID-19
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UGunyaziwe weZibuko laseJamaica (PAJ) kunye namahlakani alo ayaqhubeka nokuxhasa ukuqaliswa kwakhona kohambo lokuhamba ngenqanawa kunye neMbali yaseFalmouth Port yavulwa kwakhona ngeCawa, nge-14 kaNovemba ngo-2021 xa yamkela i-Emerald Princess, inqanawa yokuqala ukutsalela izibuko ukusukela oko kwamiswa. yemisebenzi ngenxa yobhubhani we-COVID-19.
Olu bizo lungena ngokufanelekileyo kwiinzame ze-PAJ zokuvula kwakhona amazibuko ayo kwisiqithi ngokubanzi kwimeko entsha yokusebenza.
Oku kuya kukhokelwa ziiprothokholi ezingqongqo kwaye ngokuhambelana nezikhokelo zempilo nokhuseleko ezamiselwa nguMphathiswa wezeMpilo nokuPhila (MoHW).
Isicwangciso-qhinga sokuphinda siqalise ukusebenza ngokuthe kratya, izibuko elinye ngexesha libe neziqhamo.
Izibuko le-Ocho Rios kunye ne-Errol Flynn Marina e-Port Antonio bafumana iinqanawa zabo zokuqala ukususela ekumisweni ngo-Agasti nangoNovemba ngokulandelelana kwaye nganye yavulwa ngempumelelo. Umfuziselo wokunqanda abakhweli abahamba ngenqanawa kwiindawo ezithile ezitsala umdla nangaphakathi kukhenketho olulawulwayo olwamkelwe yi-MoHW kunye neNkampani yoPhuhliso lweMveliso yezoKhenketho (TPDCo) isebenze ngetyala kwaye iya kuphunyezwa kuwo onke amazibuko okuhamba ngenqanawa. Olona gxininiso luphambili lwale modeli kukuthintela unxibelelwano nabahlali ukuqinisekisa ukhuseleko oluzinzileyo lwabemi belizwe nto leyo ephambili kunye nokunciphisa umngcipheko wokusasazeka kwentsholongwane ye-COVID-19.
INkosazana ye-Emerald iyakufowuna kunye neendwendwe ezimalunga ne-1,719 kunye nabasebenzi abayi-1,061. Amalungiselelo enziwe ukuba abakhweli abahamba ngeenqanawa batyelele iimarike zobugcisa kwidolophu yaseFalmouth kunye nokutyelela kwiindawo ezikhangayo ezivunyiweyo ezibandakanya iDolphin Cove, iDunn's River Falls kunye neChukka ngaphezu kokuthatha inxaxheba kwezinye iindwendwe ezilawulwayo.
UNjingalwazi Gordon Shirley, uMongameli kunye ne-CEO, i-PAJ ivakalise uvuyo lwakhe ngokuqalisa ngezigaba okuyimpumelelo kwecandelo loShishino lokuThumela ngeeNqanawa, nelelinye lawona mvuzo ubalulekileyo we-PAJ, kwaye ujonge ukuvulwa kwawo onke amazibuko. Uye wathi “i-PAJ iyawamkela umdla onomdla kuwo Indawo eJamaica ukuba abantu abathanda ukuhamba ngenqanawa kwihlabathi jikelele babonisile, nto leyo engqinwa kukubandakanywa kwamazibuko ethu okuhamba ngenqanawa kuhambo lweendlela eziphambili zokuhamba ngenqanawa ngaphandle kwemigaqo emitsha ye-COVID-19 yokuhamba ngenqanawa nanjengoko kubonwa ngamabhaso ethu amva nje avela kwiWorld Travel Awards kunye neUnited Kingdom. Amaza amaza. Wahlabela mgama wathi “kukho ixabiso elikhulu elinokufunyanwa kumntu ophumelele ibhaso indawo yokuhamba ngenqanawa njengeJamaica kwaye thina (i-PAJ) sinethemba elingakumbi lokuba ngenxa yotyalo-mali olwenziwe ngumbutho kwiziseko ezingundoqo zokuhamba ngenqanawa kulo nyaka, izimemezo zesizini yonyaka ozayo ziya kudlula ezo zimiselwe kulo nyaka.”
Ekwamkeleni ukubuyiswa kweenqanawa zokuhamba ngenqanawa e-Falmouth, uMphathiswa wezoKhenketho uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett uthe: “Ukubuyiswa kohambo lokuhamba ngenqanawa kwiZibuko lezeMbali laseFalmouth linyathelo elibalulekileyo ekuvuleni kwakhona icandelo lezokhenketho kwaye liya kudlala indima enkulu ekubuyiseleni kwakhona ishishini ngokubanzi kunye nokwandisa uqoqosho olubanzi, ukusuka. ifuthe lobhubhani we-COVID-19. Abadlali abaninzi baseFalmouth nakwiindawo ezingqongileyo baya kuxhamla njengoko iya kunceda ukubuyiswa kwemisebenzi efunekayo kubantu abaninzi baseJamaica abaxhomekeke kukhenketho lokukhenketha.
“Ukubuya kwenqanawa yokuhamba ngenqanawa e-Falmouth bubungqina obungakumbi bemfuno ekhulayo yeNdawo yokuFikela eJamaica. Icandelo lezokhenketho likhula kakuhle kwaye ngokusekwe kuqikelelo lwangoku silindele ukwamkela abakhweli abahamba ngenqanawa abangama-75,000 phakathi kukaNovemba noDisemba ka-2021, utshilo uMphathiswa. “Ndithanda ukuncoma bonke abachaphazelekayo abasebenze kunye ukwenza oku kufezeke kuquka iGunyabantu leZibuko laseJamaica, iSebe lezoKhenketho kunye nemibutho yalo yoluntu kunye neSebe lezeMpilo kunye neMpilo,” utshilo uMphathiswa uBartlett.
Uqaphele ukuba amalungiselelo enziwe okuqinisekisa ukuthotyelwa okungqongqo kwimigaqo ye-COVID-19 esungulwe yi-MoHW, iZiko loLawulo lweSifo lase-US (CDC) kunye namanye amahlakani ehlabathi ukuze abuyele ngokukhuselekileyo kwimisebenzi yokuhamba ngenqanawa, esongeza ukuba ngenxa yemingcipheko ebangelwa I-COVID-19, amanyathelo aya kuthathwa ukulawula ukuhamba kwabakhweli ngenqanawa.
UWilliam Tatham, uSekela Mongameli, iCruise Shipping & Marina Operations, PAJ uthe “Ndiyavuya yinkqubela phambili yemisebenzi yokuphinda iqalise i-PAJ, kwaye ndiqinisekile ukuba siza kuzisa amava okuhamba ngenqanawa akhuselekileyo nanomvuzo e-Falmouth, njengokuba nathi ndiyenzile eOcho Rios nasePort Antonio.” Ukwaphawule ukuba “eli khwelo eFalmouth lelinye inyathelo lokubuyela ngokupheleleyo kwimisebenzi yokuhamba ngenqanawa, njengoko siphinda sivula izibuko elinye ngexesha. Besisebenza ngokusondeleyo ne-MoHW kunye ne-TPDCo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli kunye nabahlali ngokufanayo kwaye umnxeba ngamnye oyimpumelelo ukhokelela kwiifowuni ezininzi kunye nokwandiswa kwamathuba. Siqinisekile ukuba uhambo lokuhamba ngenqanawa luya kuphola ngokupheleleyo ngekota yesibini kulo nyaka uzayo. ”
I-PAJ ibisebenza ngokusondeleyo ne-MoHW kunye noMphathiswa wezoKhenketho kunye namaqumrhu abo karhulumente akhethiweyo, kubandakanywa i-TPDCo kunye neJamaica Vacations Ltd (JAMVAC) ukuqinisekisa ukubuya okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kwimisebenzi yokuhamba ngenqanawa kuwo onke amazibuko ukuze kuqalise ukuqaliswa kwakhona ngokubanzi. ekuqaleni kukaDisemba 2021.